Ihe na-eme ka mpempe akwụkwọ na-emetụ Atụmatụ Ntuziaka Twitter iji mee ka Njikọ Ndị Ahịa Boo
Olee otu ị ga - esi nyocha ma chọpụta mkparịta ụka ndị dị gị mkpa na mgbasa ozi mgbasa ozi? Facebook na Twitter bụ ezigbo isi iyi nke ịbanye ọtụtụ mmadụ na ịntanetị.
Ị ghaghị ịmụta nkà na nzụlite Twitter ndị a dị elu site na Frank Abagnale, onye ọkachamara nke Semalt , ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite nkwalite ndị ahịa maka azụmahịa gị.
Ikekọrịta nza tweet na enweghị nchegharị nke mkparịta ụka agaghị enye gị nchọta rịọrọ. Ya mere, ọ dị mkpa iji nlezianya jiri saịtị mgbasa ozi gị ma mụta usoro ọhụrụ iji nweta nchọta a chọrọ.
Malite mkparịta ụka ahụ na mmiri ọchụchọ ọchụchọ
Twitter bụ ezigbo ụzọ isi nweta ọtụtụ mmadụ. Ị ga-ekwurịrị ndị ọzọ na-eji usoro a ma na-agba ọtụtụ asọmpi, mkpọsa, nyocha, na ikere òkè na mkparịta ụka na iyi mmiri ọchụchọ - free computer expert help. Ikwesighi ichefu iji onu ogugu mgbe i jiri Twitter mee ihe ma oburu na ichota ndi mmadu kariri ndi mmadu n'ile gi ma obu ahia gi. Advanced Twitter ọchụchọ enyere ndị ọrụ aka ịbanye na nkwurịta okwu bara uru. Ọzọkwa, ha na-enye gị ohere dị ukwuu iji wuo obodo gị n'ịntanetị ka i wee nwee ike imetụta ọtụtụ mmadụ..Kwe ka onwe gị jiri havehtags, isiokwu, ahịrịokwu na nhọrọ ọchụchọ Twitter jiri amamihe mee ka ị nweta nsonaazụ ndị ahụ chọrọ. Mgbe ị na-eme ihe omume, ị kwesịrị ị na-ahụ mgbe nile na ọ na-emewanye nkwalite na Twitter na ị ga-enwe ike ịmalite ọtụtụ mmadụ. Ụfọdụ ngwá ọrụ dị maka iji aka-emepụta ihe omume gị ka i wee ghara ịnọ n'enweghị nsogbu mgbe ị na-eji Twitter.
Chọta mkparịta ụka
Ikwesịrị iji ohere nyochaa njirimara Twitter maka Hootsuite iji chọta mkparịta ụka kachasị mma na ịntanetị. Nke a na-enye gị geo-chọta mkparịta ụka ka i wee nwee ike ịhazi na ịmalite ịkparịta ụka mgbe ị kwusịrị ụbọchị nke ihe omume gị. Na mgbakwunye, ị ga-enyocha ndị obodo ma ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa brik na-mortar. Nke a ga - ekwe omume site na iji nchọta nhọrọ nchọta nke Twitter, ọ na - enye aka nweta mkparịta ụka na mpaghara dị mkpa.
Chọta isi ihe mgbasa ozi mgbasa ozi
Twitter bara uru maka ndị na-eji ya maka mkparịta ụka ọkachamara. N'iji saịtị mgbasaozi mgbasa ozi a, ị nwere ike ịchọta ndị na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma nwee ike ịchọta ha. Enwere ike iji usoro nyocha Twitter dị iche iche mee ihe iji chọpụta ọtụtụ influencers na ụlọ ọrụ gị. Ikwesiri iji nyocha Twitter iji chọta aha ha na profaịlụ ha, tinyekwa hashtag yana ederede bara uru. Echiche ọzọ bụ na ị nwere ike iji nchịkọta akara Klout chọta ebe ndị ụlọ ọrụ gị dị. Kwe ka Twitter jide ndị ọzọ, ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe ịga nke ọma na ịntanetị.
I kwesịrị ime ndepụta nke ụmụazụ gị wee jụọ ha ajụjụ gbasara ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ kachasị mma. Nke a ga-azọpụta oge dị ukwuu, ị ga-esokwa ndị ọzọ na-enweghị nsogbu. Na-echeta mgbe niile na ọ dịghị ụzọ ọhụụ ga-esi nwee ihe ịga nke ọma, n'ihi ya, i kwesịrị ịdị njikere ịrụ ọrụ siri ike.